Etu esi ewu ọdọ mmiri - Ọrụ
Etu esi ewu ọdọ mmiri
Inweta onye na-elekọta ala nke ọma iji wuo ọdọ mmiri a na-akwụghị ụgwọ nwere ike ịdị oke ọnụ, yabụ soro usoro ndị a wee nweta afọ ojuju ịme ya n'onwe gị.
Dọọ ọdọ mmiri gị ebe ọ ga-enweta ọtụtụ ọkụ, ya na ụfọdụ anwụ na-acha anyanwụ iji nyere osisi aka itolite. Zere itinye ya n'akụkụ osisi deciduous, ma ọ bụghị na ị ga-eji oge dị ukwuu wepụ epupụta nwụrụ anwụ na mmiri.
Kanye akara n’ọdọ mmiri ọdọ mmiri ahụ pọgịlị ma eriri ma ọ bụ nzu. Ọ ga-adị 90cm omimi na etiti, ma ọ bụrụ na ị na-echekwa azụ. Ọ ga-achọkwa shelf maka oke osisi , na ikwe ka awọ na ihe ndi ozo puta. Iji spade, gwuo na shelf larịị (15cm). Na-esote, malite 15cm site n'akụkụ, gụpụta ndị fọdụrụ. Lelee akụkụ na ala maka nnukwu okwute ma ọ bụ ihe ndị dị nkọ nke nwere ike ịdọpụ eriri gị.
Kwadoro na ọdọ mmiri
Debe aja aja 2-3cm n’elu ala, wee dọọ ọdọ mmiri ahụ dum na akwa blanket, kapeeti dị n'okpuru ma ọ bụ n'okpuru ala, nke mere na ọ gafere n'elu obere ntakịrị. N'okpuru-liner kwesịrị ịdị 2-3cm oke. Enwere ike idozi nke a ma emechaa, ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
kacha mma osisi chipper maka ego
Maka ọdọ mmiri nke 90cm dị omimi x 180cm x 120cm, ị ga-achọ ihe nkedo na-atụle ma ọ dịkarịa ala 4.5m x 4m. Dina liner n'elu ọdọ mmiri ahụ ma jiri nwayọ na-agbada. Ọ kachasị mfe ma ọ bụrụ na ị banye na ọdọ mmiri ma wepụ akpụkpọ ụkwụ gị. Ugbu a dobe eriri ahụ ka ọ banye n'akụkụ ọ bụla na cranny, na-elebara anya na shelf. Hapụ ụfọdụ obi ụtọ, dịka eriri ga-agbasawanye mgbe jupụtara na mmiri. Gbaa mbọ hụ na enwere ihe kachasị dịkarịa 30cm, nke enwere ike idozi ya ma zoo ya, ozugbo mmiri banyere.
Ozugbo ọdọ mmiri ahụ jupụtara, ị ga-achọ oke iji zoo ihe mkpuchi ahụ ma mee ka ọdọ mmiri ahụ maa mma. Nwere ike iji brik, slate, cobbles ma ọ bụ okwute okwute. Ọ bụrụ na ị na-eji slabs, ị ga-achọ grinder iji belata oke, dị ka ndị nke Anglia Tool Center rere. Gbaa mbọ hụ na ị na-eyi ugogbe anya na mkpuchi. Ozugbo etinyere ókèala gị, ọkacha mma site na ịmacha ntakịrị, belata ihe ọ bụla ị ga - eji dochie nkume ahụ. Ọbụna nkume ndị dị arọ nwere ike ịkwụsị na ọdọ mmiri ahụ, na-adọka oghere na liner ahụ, yabụ jide n'aka na ha agbakwunyere n'ụzọ siri ike.
Chere ọ dịkarịa ala izu abụọ tupu ị gbakwunye osisi ọ bụla ma ọ bụ azụ ọ bụla na ọdọ mmiri ahụ, iji nye chlorine ohere ịgbasa. I nwekwara ike ịzụta ihe mgbakwunye iji mee ka usoro ahụ dị ngwa.
otu esi elekọta bee balm
esi ewepu nchara na ngwa oru aka
400 watt metal halide na-eto eto
esi ewe ihe ubi tomato maka afọ ọzọ
ole pusi ahihia ka nwamba ga-eri
esi tufuo ahuhu flii